ukufikelela: Sebenzisa ubuGcisa bobuGcisa ukuJongana nokuFikeleleka kweSiza | Martech Zone
ukufikelela: Sebenzisa ubuGcisa bobuGcisa ukuJongana nokuFikeleleka kweSiza
NgeCawa, ngoFebruwari 21, 2021 NgoLwesibini, Februwari 23, 2021 Douglas Karr
Ngelixa imigaqo yokufikeleleka kwesiza ibikhona kangangeminyaka, iinkampani ziye zacotha ukuphendula. Andikholelwa ukuba ngumbandela wovelwano okanye uvelwano kwicala lamashishini… Ndiyakholelwa ngokwenene ukuba iinkampani ziyasokola ukugcina.
Ngokomzekelo, Martech Zone Amanqanaba amabi ngokufikeleleka. Ixesha elingaphezulu, bendisebenza ukuphucula ikhowudi, uyilo, kunye nemethadatha efunekayo… kodwa andikwazi ukuqhubeka nokugcina umxholo wam usesikhathini kwaye ndishicilela rhoqo. Andinayo ingeniso okanye abasebenzi bokugcina ngaphezulu kwayo yonke into endiyifunayo… sele ndenza konke okusemandleni am.
Andikholelwa ukuba ndim okhethekileyo apha… eneneni amanani ayothusa xa uhlalutya iwebhu kunye nokwamkelwa kwayo kwemigangatho yokufikelela:
Uhlalutyo lwamaphepha asekhaya aphezulu kwizigidi zewebhu aqikelela ukuba ziipesenti ezi-1 kuphela ezihlangabezana nemigangatho esetyenziswa ngokubanzi yokufikelela.
Yintoni ukuFikelela? Yeyiphi iMigangatho?
Imigaqo yeWebhu yokuFikelela kwiZikhokelo (WCAG) Chaza indlela yokwenza umxholo wedijithali ufikeleleke ngakumbi kubantu abakhubazekileyo. Ukufikeleleka kubandakanya uluhlu olubanzi lokukhubazeka:
Visual Ukukhubazeka -Bandakanya ukungaboni ngokupheleleyo okanye ukungapheleli, ubumfama bombala, kunye nokukwazi ukubonakalisa ukucalula izinto ezichaseneyo
Ukukhubazeka okuphicothayo - kubandakanya ukungeva ngokupheleleyo okanye ngokungaphelelanga.
Iziphene zomzimba -Kubandakanya ukubanakho ukunxibelelana nedijithali phakathi kwezixhobo zekhompyuter ngaphandle kwezixhobo zomsebenzisi njengekhibhodi okanye imouse.
Ukukhubazeka kwentetho -Bandakanya ukukwazi ukunxibelelana nonxibelelwano lwedijithali ngentetho. Abantu abakhubazekileyo banokuba nezithintelo ekuthetheni umngeni kwiinkqubo zangoku okanye banokungabinakho ukuthetha konke konke kwaye bafuna olunye uhlobo lomsebenzisi.
Ukukhubazeka kwengqondo - iimeko okanye ukuphazamiseka okuthintela inkqubo yengqondo yomntu, kubandakanya inkumbulo, ingqalelo, okanye ukuqonda.
Ukukhubazeka kulwimi -Bandakanya imiceli mngeni kulwimi nasekufundeni.
Ukukhubazeka kokufunda -Kubandakanya ukubanakho ukuhamba ngendlela eyiyo kunye nokugcina ulwazi.
Ukukhubazeka kwengqondo -Kubandakanya ukubanakho ukusebenzisana newebhusayithi ngaphandle kokuchaphazeleka kakubi ngumxholo. Imizekelo inokubonwa okubangela ukubanjwa.
Zeziphi izinto ezibandakanya ukufikeleleka kweMidiya yeDijithali?
Ukufikeleleka ayisiyonto enye, kukudityaniswa koyilo lomsebenzisi wangaphambili kunye nolwazi olunikezelweyo:
Umxholo woLawulo lweeNkqubo - amaqonga asetyenziselwa ukuphuhlisa amava omsebenzisi. La maqonga kufuneka alungiselele ukhetho lokufikelela.
umxholo Ulwazi olukwiphepha lewebhu okanye usetyenziso lwewebhu, kubandakanya isicatshulwa, imifanekiso, kunye nezandi kunye nekhowudi okanye umda ochaza ubume kunye nengcaciso.
Iiarhente zoMsebenzisi Ujongano olusetyenziselwa ukusebenzisana nomxholo. Oku kubandakanya izikhangeli, usetyenziso kunye nabadlali beendaba.
Itekhnoloji yokunceda Ukufundwa kwescreen, ezinye iindlela zebhodi yezitshixo, iswitshi, kunye nesoftware yokuskena abantu abakhubazekileyo abayisebenzisayo ukusebenzisana nearhente yomsebenzisi.
Izixhobo zokuvavanya -Izixhobo zokuvavanywa kokufikeleleka kwiwebhu, iidigital HTML, ii-CSS ezisemthethweni, ezibonelela ngengxelo kwinkampani ngendlela yokuphucula ukufikeleleka kwendawo kunye nokuba lithini inqanaba lokuthobela.
Ufikelelo: Ukubandakanya i-AI yoFikelelo
Kukubhadla okungeyonyani (AI) ibonakalisa ukuba iluncedo ngakumbi nangakumbi ngeendlela esingakhange sizilindele… kwaye ukufikelela ngoku yenye yazo. ukufikelelaBe Idibanisa izicelo ezibini ezidibanisa ukufezekiswa ngokupheleleyo:
An Ungenelelo lofikelelo Lonke i-UI kunye nohlengahlengiso olunxulumene nokuyila.
An I-AI inikwe amandla imvelaphi yokuqhubekeka nokusingatha iimfuno ezintsonkothileyo- ukulungiselela abafundi beescreen kunye nokuhamba kwekhibhodi.
Nantsi imbonakalo yevidiyo:
ngaphandle ukufikelelaBe, Inkqubo yokufikelela kuncedo lwewebhu yenziwa ngesandla. Oku kuthatha iiveki kwaye kubiza amashumi amawaka eedola. Kodwa eyona nto ibalulekileyo malunga nokulungiswa kwemanyuwali kukuba yakuba igqityiwe, iya ichitheka kancinci ngenxa yesikhangeli, i-CMS, kwaye kunjalo, uhlaziyo lwewebhusayithi. Kwiinyanga nje ezimbalwa, iprojekthi entsha iyafuneka.
kunye ukufikelelaBe, inkqubo ilula kakhulu:
Unxibelelwano lonikezelo luyavela kwangoko kwiwebhusayithi yakho.
ukufikelelaBeI-AI iqala ukuskena kunye nokuhlalutya iwebhusayithi yakho.
Ukuya kuthi ga kwiiyure ezingama-48, iwebhusayithi yakho iyafikeleleka kwaye iyahambelana ne-WCAG 2.1, i-ADA Isihloko III, iCandelo 508, kunye ne-EAA / EN 301549.
Rhoqo kwiiyure ezingama-24, i-AI iskena umxholo omtsha kunye nohlaziyiweyo ukulungisa.
Ukukhuphela amawaka eedola amatyeli aliqela ngonyaka ayisiyonto uninzi lwamashishini lunokufikelela kuyo. Ngokwenza ukufikelela kwewebhu kungabinamsebenzi, kufikeleleke, kwaye kugcinwe ngokuqhubekekayo- ukufikelelaBe utshintsha umdlalo.
ukufikelelaBe ikwabonelela a Iphakheji yeNkxaso yeMali ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo, kwimeko yokuba ukuthobela iwebhusayithi yakho kunzima. Kunye nengqwalaselo yabo yobuqu, iphakheji ibandakanya uphicotho lobuchwephesha, iingxelo, ukufikeleleka kwemephu, ukuthotyelwa kwamaxwebhu axhasayo, isikhokelo kunye nokunye.
Funda nzulu Bhalisela Simahla
tags: acessibeIsihloko seADA IIIaikukubhadla okungeyonyaniukufikeleleka ngokuvakalayoukukhubazeka ngokuvaukufikeleleka kwengqondoukukhubazeka kwengqondoukufikeleleka kolwimiukukhubazeka kulwimiukufikeleleka kwemithambo-luvoukukhubazeka kwemithambo-luvoukufikeleleka ngokwasemzimbeniukukhubazeka emzimbeniIcandelo 508ukufikelela kwintethoukukhubazeka ekuthetheniukufikeleleka okubonakalayoukukhubazeka okubonakalayowcagIWCAG 2.1ukufikelela kwiwebhuUmxholo wewebhu izikhokelo zokufikelela
Douglas Karr Sunday, February 21, 2021 Tuesday, February 23, 2021
Froala: Yandisa iqonga lakho nge-WYSIWYG yoMhleli weeNqaku oTyebileyo
Ndilonakalise njani igama lam ngeMidiya yoLuntu… Kwaye kufuneka ufunde ntoni kuyo